Vaovao - Ahoana ny fisafidianana fandriana homecare hopitaly mety ho an'ny marary
Ahoana ny fomba hisafidianana fandriana homecare hopitaly mety ho an'ny marary
1. Ny fiarovana sy ny fitoniana amin'ny fandriana fitaizana be antitra. Ny fandriana fitaizana be antitra dia ho an'ny marary voafetra ny fivezivezeny ary efa hatory mandritra ny fotoana maharitra. Izany dia mametraka ny fepetra avo lenta kokoa momba ny fiarovana sy ny fitoniana eo am-pandriana. Ny mpampiasa dia tsy maintsy mampiseho mari-pahaizana fisoratana anarana sy fahazoan-dàlana famokarana vokatra iray ao amin'ny Sampan-draharahan'ny zava-mahadomelina rehefa mividy. Amin'izany fomba izany, azo antoka ny fiarovana ara-pitsaboana ny fandriana fitaizana be antitra.
2. Fampiharana amin'ny fandriana. Ny fandriana mpitsabo mpanampy dia azo zaraina ho herinaratra sy tanana. Ny manual dia mety amin'ny filan'ny mpitsabo mpanampy vetivety ary afaka mamaha olana sarotra amin'ny fitaizam-panahy ao anatin'ny fotoana fohy. Ny herinaratra dia mety ho an'ny fianakaviana manana marary maharitra mandry am-pandriana maharitra misy fahasembanana amin'ny fivezivezena. Izany dia tsy mampihena be ny enta-mavesatra amin'ny mpiasa mpitsabo sy ny mpianakavy, fa ny tena zava-dehibe dia ny hahafahan'ny marary mifehy ny fiainany samirery, izay manatsara ny fahatokisany ny fiainana, tsy amin'ny fiainana ihany. Ny filan'ny olona iray koa dia nahatratra ny fahafaham-pony amin'ny kalitaon'ny fiainana, izay manampy amin'ny fanarenana ny aretin'ny marary.
Fahatelo, ny harinkarenin'ny fandriana mpitsabo mpanampy, ny fandriana mpitsabo mpanampy mandeha amin'ny herinaratra dia matanjaka kokoa noho ny fandriana mpitsabo mpanampy amin'ny fampiharana, fa ny vidiny dia imbetsaka noho ny fandriana fitaizana be antitra, ary ny sasany manana andraikitra feno dia mahatratra 15 000 $ US. Ity singa ity dia tokony hodinihina koa rehefa mividy.
4. Taratasy fandriana mpitsabo miaraka amina vala roa, vala roa heny ho an'ny vala telo, vala efatra, sns. Izy io dia mety amin'ny fikarakarana ara-pahasalamana ho an'ireo marary mararin'ny tapa-tongotra sy ireo marary am-pandriana maharitra. Mety amin'ny torimaso, fianarana, fialamboly ary zavatra ilain'ny marary manokana izany.
5. Fandriana mpitsabo mpanampy miaraka amin'ny trano fidiovana sy fanairana malemy ho an'ny shampooing sy fitaovana fanasan-tongotra. Ireo fitaovana ireo dia manampy amin'ny fikolokoloana ny marary matetika sy ireo marary amin'ny tsy fihinanan'ny urinary, ary manampy amin'ny fikorontanan'ny marary sy ny fivalanan'ny marary.
Trolley laptop, Trolley hopitaly, Trolley Medical, Trolley fitsaboana miaraka amin'ny vatasarihana, Sarety Trolley fitsaboana, Trolley mpitsabo mpanampy tsy misy tariby,